Zvii Zvandinofanira Kuziva Panyaya Dzemitambo? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Turkish Twi Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Zvii Zvandinofanira Kuziva Panyaya Dzemitambo?
Kuita zvemitambo kunogona kukubatsira, kana kuti kukukanganisa. Zvinoenderana nemutambo wacho, matambire aunoita uye nguva yaunopedza uchiutamba.
Kuita zvemitambo kunogona kuita kuti munhu ave neutano hwakanaka. Bhaibheri rinototaura kuti “kurovedza muviri kunobatsira.” (1 Timoti 4:8) Mumwe mukomana anonzi Ryan anoti, “Kutamba mitambo kunobatsira chaizvo pakuita kuti muviri usangoramba wakagara. Zvitori nani pane kuswera wakagara mumba uchitamba mavhidhiyo gemhu.”
Kutamba mitambo kunoita kuti munhu adzidze kuita zvinhu pamwe chete nevamwe uye kuti azvidzore. Bhaibheri rinoshandisa mufananidzo wezvinoitwa pamutambo kuti tidzidze chimwe chinhu. Rinoti: “Vanomhanya munhangemutange vanomhanya vose, asi mumwe chete ndiye anogamuchira mubayiro.” Rinobva razoti: “Munhu wose anopinda mumakundano anozvidzora muzvinhu zvose.” (1 VaKorinde 9:24, 25) Saka tinodzidzei ipapo? Munhu anofanira kuzvidzora uye kubatsirana nevamwe kuitira kuti atevedzere mitemo yemutambo waanenge achitamba. Mumwe musikana achiri kuyaruka anonzi Abigail anobvumirana nazvo. Anoti, “Kutamba mitambo kwakandidzidzisa kubatsirana nevamwe uye kutaurirana nevamwe zvakanaka.”
Kutamba mitambo kunoumba ushamwari. Mutambo unosanganisa vanhu. Mumwe mukomana anonzi Jordan anoti, “Handifungi kuti pane mutambo usingaitwi makwikwi. Asi kana muchingoitira henyu kunakidzwa, kutamba mutambo kunoita kuti muwane nguva yekufara muri pamwe chete seshamwari.”
Mutambo werudzii? Bhaibheri rinoti: “Jehovha anoongorora munhu akarurama pamwe chete neakaipa, Mweya wake unovenga munhu wose anoda zvechisimba.”​—Pisarema 11:5.
Mimwe mitambo inotoitwa zvechisimba. Semuenzaniso, mumwe musikana anonzi Lauren anoti: “Chinangwa chemutambo wetsiva ndechekuti urove mumwe munhu. SevaKristu, tinodzivisa kurovana nevanhu, saka tingadirei hedu kuvaraidzwa nekuona vanhu vachirohwa?”
Zvekufunga nezvazvo: Unoona pasina chakaipa here nekutamba kana kuti kuona mitambo inoitwa zvechisimba, uchifunga kuti hazvizoiti kuti uitewo zvechisimba? Kana zvakadaro, yeuka kuti Pisarema 11:5 inoti Jehovha anovenga munhu “anoda zvechisimba,” kwete munhu anoita zvechisimba chete.
Unoutamba sei? Bhaibheri rinoti: “Musingaiti chinhu nokukakavara kana kuzvikudza, asi nepfungwa dzinozvininipisa muchifunga kuti vamwe vakuru kwamuri.”​—VaFiripi 2:3.
Ichokwadi kuti panotambwa mutambo chero upi zvawo nematimu akasiyana, panenge paine kakukwikwidzana. Asi kana vanhu vakatamba vaine pfungwa yekungoda kuhwina chero zvodini, zvinoita kuti mutambo wacho usanakidza. Mumwe mukomana achiri kuyaruka anonzi Brian anoti, “Unogona kuzopedzisira wangova munhu wemakwikwi, usingachadi kukundwa. Sezvaunowedzera kugona mutambo wacho, unotofanirawo kushanda nesimba kuti usazvikudza.”
Zvekufunga nezvazvo: Mumwe mukomana anonzi Chris anoti, “Tinotamba bhora vhiki rega rega, uye pane vanokuvara.” Saka zvibvunze kuti, ‘Zvii zvinowanzoita kuti vanhu vakuvare? Chii chandingaita kuti ndisangogara ndichikuvara?’
Unoutamba kwenguva yakawanda sei? Bhaibheri rinoti: “Muve nechokwadi chokuti zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe ndezvipi.”​—VaFiripi 1:10.
Unofanira kuziva zvekuisa pekutanga. Zvinhu zvekunamata ndizvo zvinofanira kuva pekutanga. Mitambo mizhinji inogona kutora nguva yakawanda uchiitamba kana kuti uchingoiona chete. Mumwe musikana anonzi Daria anoti, “Ndaimbonetsana namhamha vangu panyaya yenguva yandaipedza ndichiona mitambo paTV, panzvimbo pekushandisa nguva yacho kuita zvimwe zvinhu zvine musoro.”
Kunyanya kukoshesa zvemitambo kwakafanana nekuisa munyu wakawandisa muchikafu chako
Zvekufunga nezvazvo: Vabereki vako vakakupa mazano ekuti ndezvipi zvaunofanira kuisa pekutanga, unovateerera here? Mumwe musikana anonzi Trina anoti: “Inini nevanin’ina vangu pataimbotadza kuita mamwe mabasa anokosha ataifanira kuita nemhaka yekuti tinenge tichiona mitambo, mhamha vangu vaibva vatiyeuchidza kuti vatambi vacho vachangobhadharwa chete pasinei nekuti taona mutambo wacho here kana kuti kwete. Vaibva vazotibvunza kuti, ‘Ko imi muchabhadharwawo naani?’ Zvavaireva ndezvekuti: Vatambi vacho vatori pabasa. Asi kana isu tikaita zvekutamba torega kuita homuweki yedu nemamwe mabasa atinofanira kuita, zvaizoita kuti titadze kuzviriritira kana takura. Zvavaitiudza ndezvekuti, kuona kana kuti kutamba mitambo hakufaniri kubva kwava iko kunonyanya kukosha muupenyu hwedu.”
“Kutamba mitambo hakungoiti kuti urovedze muviri wako chete, asiwo kunoita kuti ufare uye kuti uve neutano hwakanaka. Zvinokubatsira kuti udzidze kuramba uchizvininipisa paunohwina uye kuti usare uine ruremekedzo paunokundwa.”​—Abigail.
“Ndinofarira zvemitambo, asi hainditadzisi kuita zvimwe zvinhu zvandinenge ndichifanira kuita. Kuona mutambo kwakaita semubayiro wandinozvipa wekuti ndakwanisa kuita zvandaifanira kuita. Zvinoita kuti ndiwane simba rekuita mabasa andinofanira kutanga ndaita uye kuti ndizive zvekuisa pekutanga muupenyu.”​—Deven.
Kuziva Nguva Yekumbozvivaraidza Neyemabasa Aunofanira Kuita
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvii Zvandinofanira Kuziva Panyaya Dzemitambo?
ijwyp nyaya 53
Zvaunofanira Kuziva Nezvemitambo